Fantaro i Siki Dlanga, mpikatroka ho an’ny fiteny Xhosa · Global Voices teny Malagasy
Fantaro i Siki Dlanga, mpikatroka ho an'ny fiteny Xhosa
Siki dia mpiteny ny fiteny Xhosa fampiasana ao Afrika Atsimo
Voadika ny 04 Mey 2022 5:35 GMT
Sary natolotr'i Siki Dlanga, fampiasàna nahazoana alàlana.
Anatin'ireo andiany ataonay amin'izao fotoana izao mba hanasongadinana ny asan'ireo mpikatroka mampahafantatra ireo fiteny afrikàna aty anaty habaka nomerika, tianay ny hanasongadina an'i Siki Dlanga (@sikeedlanga) avy ao Afrika Atsimo. Siki dia mpiteny ny fiteny Xhosa, fiteny iray ampiasain'olona 19 tapitrisa eo ho eo manerana an'i Afrika Atsimo ho toy ny fitenindrenin-dry zareo, na fiteny faharoa ao Afrika Atsimo sy ampahany vitsivitsy ao Zimbaboe.
Rising Voices (RV): Mba lazalazao anay ny momba anao, azafady
Siki Dlanga (SD): Izaho dia miasa ho an'ny South African Indigenous Languages Action Forum (vovonan'ny hetsika ho an'ireo fiteny indizeny ao Afrika Atsimo) izay fantatra koa amin'ny fanafohezana hoe ILAF. Tambajotra iray io, izay mampifandray ireo mpikatroka ho an'ny fiteny indizeny avy amin'ny lafivalo rehetra, na dia ireo nandalo anjerimanontolo aza no tena mahafantatra azy. Mampahafantatra ny asan'ireo mpikatroka ho an'ny fiteny indizeny ao Afrika Atsimo ny ILAF. Hamorainay ny fifampiresahana, ampiroboroboinay sy asongadinay ireo rehetra asa ho an'ny fiteny indizeny ka miabo ao amin'ny firenena. Misy olona vitsivitsy manoratra boky matematika sy siansa amin'ireo fiteny indizeny ary tianay ny hampahafantatra ny asan'izy ireny. Ny hafa indray namorona rakipeo (podcasts) na miasa miaraka amin'ny rafi-pitsaràna sy ireo fiteny indizeny. Misandrahaka be ny asan-dry zareo. Misy an-tapitrisa ireo mpiteny fiteny teratany ao Afrika Atsimo ary mbola be ny asa tsy maintsy hatao.
RV: Inona no manosika anao hanao izay hahitàna ny fiteninareo eny anaty habaka nomerika??
SD: Iriko ny hahita bebe kokoa ireo ray aman-dreny hazoto hampianatra ny zanany ny fitenindrenin-dry zareo, fa tsy hamela azy io hosovohan'ny fiteny anglisy. Tiako ny hahita habaka nomerika mandrisika ireo mpiteny ilay fiteny mba hampivoatra ilay fiteny eny amin'ireo sehatra misy azy ireo tsirairay avy.
SD: Ampiasaina ety anaty tambajotra ilay fiteny saingy tsy mifanandrify hatrany ny fandikàna azy. Mety ho sahirana amin'ny firatekana an-tsoratra araka ny tokony ho izy ireo manana fahasembanana te-hampiasa azy anaty habaka nomerika, satria tsy natao ho an'ny Xhosa ilay izy no sady mbola ny mpiteny anglisy no omeny vahana kokoa.
RV: Aminao, inona no dingana mivaingana heverinao hatao mba handrisihana ny tanora hanomboka hianatra ny fiteniny na hanohizany hampiasa ny fiteniny?
SD: Voalohany indrindra dia ilaina ny mandrisika ireo ray aman-dreny mba hampita ilay fiteny amin'ireo taranany. Faharoa, ilaina hita izay tombony amin'ny alàlan'ny fahatakarana ny fahafahana ara-toekarena azo miaraka amin'ny fianarana ireo fiteny indizeny.
Fantaro i Bali Nangavulan, lehilahy indizeny an-tanandehibe mitady lalana hiverenana amin'ny Bunun niaviany
Mediam-bahoaka 3 andro izay